नाटकप्रेमीहरूका लागि भाषाको सिमाना हुँदैन : सगुना शाह | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित १३ आश्विन २०७८ १२:०१
शिक्षासेवी सगुना शाह नेपाली भाषाको अनुवाद साहित्यका अनिवार्य नाम बनिसकेको छ । उनले अनुवाद गरेको कान्छा महारानी २०७६–०७७ सालमा सबैभन्दा बढी विक्री हुने पुस्तकहरु मध्ये एक बनेको थियो ।
विगत १० वर्षदेखि पढाकूहरुको सार्वजनिक चौतारोका रुपमा विकसित बुकाहोलिक्सकी संस्थापक सगुना हिजोआज नाटकमा व्यस्त छिन् । विश्व रंगमञ्चमा अद्वितीय छाप छाडेका विलियम सेक्सपियरको Romantic Pastoral Comedy ” As You Like It,” मा उनी अभिनय गरिरहेकी छन् । ४ वटा नाटकमा अभिनय गरिसक्दा पनि आफूलाई कलाकार मान्न हिच्किचाउने सगुना किन नाटकमा अभिनय गरिरहेकी छन् ? नेपाली भाषामै नाटक मञ्चन नभइरहेको अवस्थामा अंग्रेजीमा नाटक गर्नु चुनौति हो । त्यसमाथि विलियम सेक्सपियरको समयमा बोलिने प्राचीन अंग्रेजी भाषामै “New Shakespearewallahs” टिमले नाटक किन गर्न चाह्यो ? यो विषयमा साहित्यपोस्टलाई चासो लागेपछि हामीले सगुनासँग सम्पर्क राखेका थियौँ ।
प्रस्तुत छ, साहित्यपाेस्टका लागि सगुना शाहसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश;
तपाइँ नयाँ किताबको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, अचानक नाटकमा अभिनय गरिरहनु भएको कुरा बाहिर आयो ? यसको कारण के होला ?
नयाँ किताबको तयारी भन्दा पनि अनुवादमा नै व्यस्त थिए। रङ्गमञ्चमा स्कूलका दिनहरू देखि नै भाग लिने गर्दथेँ। २०१३ मा पहिलो पटक One World Theater, डेबोरा मेरोलाको निर्देशनमा भएको टेलिङ्ग अ टेलमा आफ्नै संस्मरणमाथि अभिनय गर्ने अवसर पाए। त्यसपछि दुई पटक इभ इन्सलरको The Vagina Monologues ( योनिका कथा) लगायत विलियम शेक्सपियद्वारा लिखित ‘मिड समर नाइट्स ड्रिम’ मा अभिनय गरे। न्यू शेक्सपियरवालाजसंग २०१७ मा उक्त नाटकमा काम गरिसकेकोले नै यो मौका फेरि पनि जुरेको हो। सानो भए पनि भूमिका राम्रो भएकोले गर्न तयार भए। फेरि यो लकडाउनले ल्याएको एकनासको कामको रुटिन भन्दा रङ्गमञ्च फरक पनि भयो।
नेपालमा नाटक मञ्चन आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । त्यसमाथि अंग्रेजी, दर्शक पाउनु होला ?
चुनौती के कुरामा छैन र ? तर त्यति हुदाँ हुँदै पनि राम्रा राम्रा नाटकहरू मञ्चन भइनै रहेका छन्। साथै रङ्गमञ्च रुचाउने दर्शक पनि प्रशस्तै हुनुहुन्छ। कोविड-१९ ले गर्दा निश्चयनै पनि नाटक मञ्चनमा केही ह्रास् आएता पनि सधैं हाथ बाँधेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन। बिस्तारै जनजिवन सामान्य बनाउँदै जान पर्ने छ। रह्यो कुरा अङ्ग्रेजीमा दर्शक पाउने, नाटकप्रेमीहरुको लागि भाषाको सिमाना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अङ्ग्रेजी नाटक नै रुचाउने दर्शकलाई पनि शेक्सियरका नाटक बुझ्न गार्हो हुन सक्छ। तर, फेरि शेक्सपयर पढ्न, बुझ्न र जान्न अभिरुचि राख्नेका लागि भने यो राम्रो अवसर हुन सक्छ।
अहिले बोर्डिङ् स्कुलका कारण युवा पुस्ताका लागि अंग्रेजी सजिलो भाषा भएको कुरा ठिकै हो । तर सेक्सपियरकै भाषा प्रयोग गरेर नाटक मञ्चन चुनौतिपूर्ण होइन ?
शेक्सपियर बुझ्नु भनेको अंग्रेज़ी मातृभाषा भएकालाई पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ। तर जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि। नाटक रिहरसल गर्दैगर्दा पहिले त आफुले अभिनय गरेको पात्रमात्र नभई पुरै नाटकमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न र त्यसलाई दर्शकसामु अभिनय मार्फत कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा घण्टौं छलफल हुन्थ्यो। ग्रेटा राणाको मातृभाषा अंग्रेजी मात्र नभई वहाँ त्यही ठाँउबाट नै भएकोले वहाँको सहयोग निकै मह्त्वपूर्ण रहेको छ। आशा गरौं हामी दर्शक सामु यो ल्याउन सकौ।
यो नाटक दर्शकले किन हेर्ने ?
मानविय स्वभाव परिवर्तनशील छ। यसको स्वरूप बेलाबेलामा परिवर्तन भएतापनि लुप्त हुने कुरा भने होईन। त्यसबेला विद्यमान रहेको सामाजिक विभेद, सत्ताको लागि हुने षड्यन्त्र, महिलाले आफ्नो प्रेम पाउनका लागि गरेको सङ्घर्ष, लोग्ने मानिसमा हुनपर्ने पुरुषार्थ सबै बुझ्नका लागि यो नाटक हेर्नुपर्ने हुन्छ। शेक्सपियरद्वारा लिखित नाटक त्यही समयको भाषा र शैलीमा मञ्चन हुने गर्दैन। यो एउटा विशुद्ध कमेडी हो। रमाईलो छ।
यो नाटकमा तपाइँले निभाएको पात्र कुन हो ?
यसमा मेरो भूमिका सानो रहे तापनि महत्वपूर्ण छ। मैले निभाएको पात्र ‘ कोरिन ‘ एउटा बुढो गोठालो हो जसले दर्शनका कुरा गर्दछ। खासमा यो पुरुष पात्र हो।
यस्तो चुनौतिपूर्ण पात्रलाई न्याय गर्न सक्नुहोला ?
कोशिश रहने छ। आफू रङगमञ्च कलाकार नभएकोले होला मेरो आफ्नो कम्पिटिसन आफैसँग रहेको छ। Greta Rana लाई त म माथि सार्है विश्वास छ। सह निर्देशकको रूपमा रहनुभएका आशान्त शर्मा , दिव्य देव अनि अन्य कलाकारहरुको निकै सहयोग पाएकी छु। हेराैँ दर्शकलाई कस्तो लाग्छ। यस अघि मिड समर नाइट्स ड्रिममा परीको भूमिका निभाएकी थिए।
नाटकमा को को हुनुहुन्छ ? उहाँहरुको अनुभव तपाईँलाई पक्कै थाहा छ । केही अनुभवहरु बताइदिनूस् न ।
सबै नेपाली र अंग्रेजी रङ्गमञ्चमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरु हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यसमा सह निर्देशकका रूपमा कार्य गरिरहनु भएका आशान्त शर्मा तीन वटा भूमिकामा हुनुहुन्छ। सरोज अर्यालको पनि दुईटा पात्रको रुपमा हुनुहुन्छ। समापिका गौतम, विजया कार्की, सुरभी सापकोटा, संदीप श्रेष्ठ ,राजन थापा विशेष गरी नेपाली रङ्गञ्चका ख्यातिप्राप्त कलाकार हुनुहुन्छ। यसै गरी प्राय अंग्रेजी नाटक मार्फत रङ्गमञ्चमा आउनु भएका उत्पल झा जो फिल्म मेकर पनि हुनुहुन्छ, सुश्रुत आचार्य , गुन्जन दीक्षित अनि विजय आनन्द ताम्राकार मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। ब्रायन वाइट सिंह, आडेन बात्री, सदिन लुइँटेल अन्य उदयमान कलाकार हुन्।
केही कलाकारका लागि ‘न्यू शेक्सपिरवालाज’सँगको सहकार्य पहिलो पटक हो भने , हामी केहीका लागि यो दोस्रो प्रोजेक्ट हो। रिहरसल अनुभव समग्रमा भन्न पर्दा निकै उत्साहपूर्ण नै रह्यो। शुरुवाती चरणमा घरभित्र थुनिएर बसेको अवस्थामा यस फरक शैलीको नाटकमा अभिनय गर्न पाउनुले एउटा नयाँ जोश र उत्साह ल्यायो भने काम गर्दै जाँदा केही मनमुटाव पनि भए। यो हुनु स्वाभाविक पनि हो १६ जनाको ठूलो कास्ट मा। यस बाहेक बिचमा निकै महिना मिहिनेत गरिसकेका साथीहरूले स्वास्थ्य अनुकूल नभएकोले नाटक छाड्नु पर्ने अवस्था आयो। सबै भन्दा दुःखको कुरा चाहिँ संदेश ल मोटे शाक्यसँग सहकार्य गर्ने मौका गुम्यो।
त्यो बेला सेक्सपियरले कल्पना गरेको पात्र, हास्यरस, त्यसबेलाका दर्शक अनुरुप न्याय गर्न सक्नुहोला ?
सबैको कोशिश रहने छ, दर्शकले कत्तिको रुचाउनु हुनेछ। Greta Rana, दिव्य देव अनि आशान्त शर्माले सबै कलाकार माथि निकै मिहिनत गर्नुभएको छ।
अरु कलाकारहरुको परफरमेन्स कस्तो देख्नुभएको छ ?
सबै लामो समयदेखि रङ्गमञ्चमा लाग्नु भएका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ सबै भन्दा रमाइलो लागेको पात्र अड्रे विजया कार्की, फिबी सुरभी सापकोटा , सिलिया समापीका गौतमको हो। उत्पल झा, गुन्जन dixit समापिका गौतम, संदीप श्रेष्ठ , विजय ताम्राकारको भुमिका भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सबैले एकदम धेरै काम गर्नु भएको छ। उत्पल झाको रुचि फिल्म Direction मा बढी भएपनि यस भूमिकामा वहाँलाई निकै रूचाइने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।
नाटक कहिलेदेखि कहाँ मञ्चन हुन्छ ? कस्ता दर्शकको अपेक्ष गर्नुभएको छ ?
शिल्पी थिएटर बत्तीसपुतलीमा अक्टोबर १-३ मा चार वटा शो हुनेछ। शनिबार म्याटिनी शो पनि हुनेछ भने अरु दिन ५:३० मा नाटक मञ्चन हुनेछ । सबै किसिमका दर्शकको अपेक्षा रहनेछ ।
लेखनमा लागेकाहरुले पैसा तिरेर यो नाटक हेर्न किन जाने ?
मौलीक कृतिहरू वर्षौ सम्म बाँचीरहने छन् भनेर। टाईमलेस हुने छन् भनेर।
एउटा फरक प्रश्न, कान्छा महारानी पढेका पाठकहरु तपाइँको मौलिक कृति पढ्न आतुर छन । त्यो किताबचाहिँ पाठकले कहिले पढ्न पाउलान ?
भविष्यमा । त्यसको लागि त पहिले म लेखकको रुपमा तयार हुन पर्यो। कथा सबैसँग छन् , भन्न जो कोहीले सक्छन् तर शैली, शिल्प, भाषा, क्राफ्ट ? त्यसमा काम गर्न जरुरी छ । समय आउला ।